နှစ်ခြမ်းကွဲ စစ်တွေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Hot News ဂျာနယ် ဆောင်ပါးရှင် နိုင်ထက်ရှိန်(ဟင်္သာတ)သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
After clashes, plight of segregated Muslims isachallenge to Myanmar democracy hopes »
“ကျနော်တို့က ဒီမှာ အကျဉ်းသားတွေလို နေနေရတာပါ” လို့ ဦးသန့်ဇင်က ပြောပါတယ်။ သူက မီးရှို့မခံရဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ စစ်တွေမြို့လယ်က ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဇွန်လကတည်းက ပုန်းနေခဲ့သူပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်လာရောက်တဲ့ အမေရိကန် သံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်းမှာ တွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့အခါ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက စစ်တွေမြို့ရဲ့ အနေအထားသစ်ကို အသေးစိတ် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့ မြေပုံကို လက်နဲ့ ဖြတ်ဆွဲပြီး သူက အခုဆိုရင် ဟိုဖက်အုပ်စု ဒီဖက်အုပ်စု “မကျော်ရတဲ့ လိုင်းတွေရှိတယ်၊” အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် “ရန်လိုတာတွေ၊ ဒေါသတကြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေ ရှိ လိမ့်မယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တာ အဲ့ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ကျနော်တို့ တကယ် ကြုံတွေ့နေရတာပါ” လို့လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အပြုံးနဲ့ ဖြည့်ပြောပါသေးတယ်။
“ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် စခန်းတွေထဲ ခွဲထည့်တာ၊ သူတို့တွေ နိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးတာနဲ့ တချို့ အခြေအနေတွေမှာ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ချခံရတာတွေ ကျနော်တို့ တွေ့နေရတာပေါ့” လို့ HRW ရဲ့ သုတေသီ မက်သယူး စမစ် (Matthew Smith) က ဆိုပါတယ်။ သူက ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြာ သေးခင်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ HRW အစီရင်ခံစာကို ရေးသားခဲ့သူပါ။
စစ်တွေလို နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် “ရိုဟင်ဂျာတွေကို အမြဲတမ်း ခွဲထုတ်ပစ်မယ့် အန္တရာယ်ရှိနေတယ်၊ ဒါက ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုအတွက် အလားအလာ မကောင်းဘူး” လို့လည်း သူက ပြောပါ သေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကတည်းက အာဏာပိုင်တွေ အတင်းပိတ်ခိုင်းခဲ့တာမို့ ကလေး ၅ ယောက်ရဲ့ဖခင် ဦးသန့်စင်ဟာ ဈေးထဲက သူ့ဆိုင်ခန်းလေးကို အခုထိ ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။ တယောက်ကဆို “ဒီဆိုင်ခန်းက အခုဆို ရခိုင်တွေ အတွက်ဖြစ်သွားပြီ” လို့ သူ့ကို ပြောတယ်တဲ့။
“ကျနော်တို့အားလုံး လုပ်ချင်တာကတော့ အလုပ်ရှိရာ ပြန်သွားချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဘဝတွေ ပြန်ရဖို့ အတွက် အစိုးရက ဘာမှ အကူအညီမပေးဘူး” လို့ ဦးသန့်စင်က ဆက်ပြောပါတယ်။
“အခုဆိုရင် သူတို့အတွက် ကျနော် ဘာကိုမှ မခံစားရတော့ဘူး။ ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့ကို ဆက်ယုံလို့ မရတော့ဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူတို့ကို ဒီနေရာက ထွက်သွားစေချင်တယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သူတို့ကို အတူ နေစေချင်တယ်၊ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် လူတွေကို ပြောင်းဖို့ ကျနော် တို့ ဖိအားပေးလို့ မရဘူးလေ” လို့ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
“ဒေါသက အရှိန်မြင့်နေဆဲပဲ။ သူတို့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အိမ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတာကို ဘယ်ဘက်ကမှ မေ့လို့မရဘူး ဖြစ်နေ တယ်” လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေ “ပုံမှန်” ပြန်ဖြစ်လာဖို့ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေကို လေ့ လာမှုလုပ်နေတယ်၊ ဥပမာ – ရခိုင်ကျောင်းသားတွေက မနက်ပိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်တက်ရင် ရိုဟင်ဂျာတွေက မွန်းလွဲပိုင်း မှာတက်တာမျိုးပေါ့ လို့လည်း သူက ဆိုပါသေးတယ်။
သူက “ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် ဈေး နောက်တခု၊ ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ နောက်တခု၊ ဆိပ်ကမ်း နောက်တခု ကျနော်တို့ ထပ်ဆောက်ရကောင်း ဆောက်ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် “သိပ်ခက်လိမ့်မယ်” တဲ့။
Tags: Advocacy Organizations, Asia, Human rights, Human Rights and Liberties, Human Rights Watch, Iran, Malaysia, Moscow
This entry was posted on October 6, 2012 at 5:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.